A kpara uwe ndị nchụàjà (1)
Akpa a na-anya n’obi (8-21)
Uwe na-enweghị aka (22-26)
Ihe ndị ọzọ ndị nchụàjà ga-eyi (27-29)
Ihe mbadamba e ji ọlaedo mee (30, 31)
Mosis leruru ihe ndị a rụrụ anya (32-43)
39 Ha ji eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, na eri na-acha uhie uhie+ kpaa uwe ndị a kpara nke ọma a ga-eyi na-eje ozi n’ebe nsọ. Ha kpara uwe nsọ Erọn,+ otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 2 O ji ọlaedo, eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, na ezigbo eri linin a kpara akpa kpaa efọd.+ 3 Ha ji hama kụọ mbadamba ọlaedo dị iche iche ka ha dị fere fere. O wee berisịa ha ka ha dị ka eriri, ka o wee jiri ha na eri ahụ na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ ahụ na-acha pọpụl, eri ahụ na-acha uhie uhie, na ezigbo ákwà linin ahụ kpaa efọd ahụ. A kpakwara ihe na ya iji chọọ ya mma. 4 Ha kpara ubu ya ihu na azụ bụ́ ndị e jikọtara ọnụ. E jikọtara ha n’ebe elu ya abụọ. 5 E jikwa ihe ndị e ji kpaa efọd ahụ, ya bụ, ọlaedo, eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, na ezigbo eri linin, kpanye eriri* n’efọd ahụ nke a ga-eji na-ekegide ya,+ otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 6 Ha wee kwụnye nkume ọnịks n’ihe mbadamba abụọ e ji ọlaedo kpụọ, ha denyekwara aha ụmụ Izrel* na ha otú e si akanye akara na mgbaaka e ji aka ihe akara.+ 7 O tinyere ha n’ubu efọd ahụ ka ha bụrụ nkume ncheta maka ndị Izrel,+ otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 8 O wee kpaa akpa a na-anya n’obi.+ Ọ bụ onye na-akpa ihe n’ákwà kpara ya otú ahụ e si kpaa efọd ahụ. E ji ọlaedo, eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, na ezigbo eri linin a kpara akpa kpaa ya.+ 9 O nwere akụkụ anọ há nhata mgbe a pịajiri ya abụọ. Ha kpara akpa ahụ a na-anya n’obi ya adị otu ntụ ọbụ aka* n’ogologo nakwa n’obosara mgbe a pịajiri ya abụọ. 10 Ha tinyere ahịrị nkume anọ na ya. Ahịrị nke mbụ bụ rubi, topaz, na emerad. 11 Ahịrị nke abụọ bụ tọkwọiz, safaya, na jaspa. 12 Ahịrị nke atọ bụ nkume leshem,* aget, na ametist. 13 Ahịrị nke anọ bụ krisolaịt, ọnịks, na jed. A kwụnyere ha n’ihe mbadamba ndị e ji ọlaedo rụọ. 14 Nkume ndị ahụ dị ole aha ụmụ Izrel* dị, ya bụ, iri na abụọ. E denyere aha ha otú e si akanye akara na mgbaaka e ji aka ihe akara. Aha nke ọ bụla nọchikwara anya otu ebo n’ime ebo iri na abụọ ahụ. 15 Ha wee jiri ọlaedo a na-agwaghị agwa mee ụdọ ígwè a hịkọrọ ahịkọ ka eriri n’elu akpa ahụ a na-anya n’obi.+ 16 Ha wee jiri ọlaedo kpụọ ihe mbadamba abụọ na ihe abụọ dị okirikiri ma tinye ihe abụọ ahụ dị okirikiri n’akpa ahụ a na-anya n’obi, n’isi isi ya abụọ. 17 Ha ganyeziri ụdọ ígwè abụọ ahụ e ji ọlaedo mee n’ihe abụọ ahụ dị okirikiri dị n’akpa ahụ a na-anya n’obi, n’isi isi ya abụọ. 18 Ha wee ganye isi abụọ nke ụdọ ígwè abụọ ahụ n’ihe mbadamba abụọ ahụ ma kegide ha n’ubu efọd ahụ, n’ebe ihu ya. 19 Ha jizi ọlaedo kpụọ ihe abụọ dị okirikiri ma kwụnye ha n’ime akpa ahụ a na-anya n’obi, n’isi isi ya abụọ, ka ha chee efọd ahụ ihu.+ 20 Ha wee jiri ọlaedo kpụọ ihe abụọ ọzọ dị okirikiri ma kwụnye ha n’ihu efọd ahụ, n’ebe mgbada efọd ahụ, n’akụkụ ebe e jikọtara ya, n’elu ebe eriri* efọd ahụ dị. 21 N’ikpeazụ, ha ji eriri na-acha anụnụ anụnụ kekọta ihe abụọ ahụ dị okirikiri dị n’akpa ahụ a na-anya n’obi na ihe abụọ dị okirikiri dị n’efọd ahụ, ka akpa ahụ a na-anya n’obi dịrị n’elu efọd ahụ, n’elu ebe eriri* efọd ahụ dị, otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 22 O wee kpaa uwe na-enweghị aka nke efọd ahụ ga-adị n’elu ya. Ọ bụ onye na-akpa ákwà ji naanị eri na-acha anụnụ anụnụ kpaa ya.+ 23 Uwe ahụ na-enweghị aka nwere oghere n’etiti ebe elu ya. Ọ dị ka oghere na-adị n’uwe agha. A kpara ọnụ ọnụ oghere ya ahụ akpa gburugburu ka ọ ghara ịdọka adọka. 24 Ha jizi eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, na eri na-acha uhie uhie a kpakọtara ọnụ kpaa ihe yiri mkpụrụ osisi pomigranet gburugburu ọnụ ọnụ ala uwe ahụ na-enweghị aka. 25 Ha jikwa ọlaedo a na-agwaghị agwa kpụọ mgbịrịgba ma tinye ha n’agbata ihe ndị ahụ yiri mkpụrụ osisi pomigranet gbaa gburugburu ọnụ ọnụ ala uwe ahụ na-enweghị aka, n’agbata ihe ndị ahụ yiri mkpụrụ osisi pomigranet. 26 Ha tinye otu ihe yiri mkpụrụ osisi pomigranet, ha etinye otu mgbịrịgba, ha tinyekwa otu ihe yiri mkpụrụ osisi pomigranet, ha etinye otu mgbịrịgba ọzọ, gbaa gburugburu ọnụ ọnụ ala uwe ahụ na-enweghị aka e ji eje ozi, otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 27 Ha wee jiri ezigbo eri linin kpaara Erọn na ụmụ ya ndị nwoke uwe mwụda dị iche iche.+ Ọ bụ onye na-akpa ákwà kpara ha. 28 Ha jikwa ezigbo eri linin kpaa ákwà isi+ na ákwà ịchọ mma ụmụ Erọn ga na-eke n’isi,+ jiri ezigbo eri linin a kpara akpa kpaa uwe úkwù.*+ 29 Ha jikwa ezigbo eri linin a kpara akpa, eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, na eri na-acha uhie uhie a kpakọtara ọnụ kpaa ákwà a na-eke n’úkwù, otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 30 N’ikpeazụ, ha ji ọlaedo a na-agwaghị agwa mee ihe mbadamba na-egbuke egbuke, bụ́ ihe àmà dị nsọ,* ma dee “Jehova bụ Onye dị nsọ” na ya, otú e si akanye akara na mgbaaka e ji aka ihe akara.+ 31 Ha ganyere ya eriri na-acha anụnụ anụnụ a ga-eji kegide ya n’ákwà isi ahụ, otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 32 E wee rụchaa ọrụ niile a rụrụ maka ụlọikwuu ahụ, ya bụ, ụlọikwuu nzute. Ndị Izrel mere ihe niile Jehova nyere Mosis n’iwu.+ Ha mere nnọọ otú ahụ. 33 Ha buteziiri Mosis ihe niile a ga-eji rụọ ụlọikwuu ahụ,+ ha na ákwà ụlọikwuu ahụ+ na ihe ndị ga-adị na ya: nko ya,+ frem ya,+ okporo osisi ya+ na ogidi ya na ntọala ya ndị nwere oghere;+ 34 ihe a ga-eji kpuchie ya e ji akpụkpọ ebule e sijiri ọbara ọbara mee,+ ihe a ga-eji kpuchie ya e ji akpụkpọ anụ sil mee, ákwà mgbochi a ga-eji gechie ya;+ 35 igbe ọgbụgba ndụ* ahụ na okporo osisi ya+ na okwuchi ya;+ 36 tebụl ahụ, arịa ya niile na achịcha a na-enye Chineke;+ 37 ihe e ji adọsa ọkụ* e ji ọlaedo a na-agwaghị agwa rụọ, ọkụ* ya+ ndị kwụ n’ahịrị, na arịa ya niile+ na mmanụ a ga-eji na-amụ ọkụ;+ 38 ebe ịchụàjà+ e ji ọlaedo rụọ, mmanụ a ga-eji na-ete mmadụ mmanụ,+ insens na-esi ísì ọma,+ ákwà ngebichi*+ nke ga-adị n’ọnụ ụzọ e si abata n’ụlọikwuu ahụ; 39 ebe ịchụàjà e ji ọla kọpa rụọ+ na ihe e ji ọla kọpa kpaa a ga-etinye n’ime ya, okporo osisi ya,+ arịa ya niile,+ nnukwu ite na ihe a ga-eji adọkwasị ya;+ 40 ákwà mgbochi ndị ga-adị n’ogige ụlọikwuu ahụ, ogidi ya na ntọala ya ndị nwere oghere,+ ákwà ngebichi*+ nke ga-adị n’ọnụ ụzọ ogige ahụ, ụdọ ndị a ga-eji jide ákwà ogige ụlọikwuu ahụ na mkpọ́ ndị a ga-eji jide ákwà ogige ya+ na arịa niile a ga-eji na-eje ozi n’ụlọikwuu, ya bụ, ụlọikwuu nzute; 41 uwe ndị a kpara nke ọma a ga-eyi na-eje ozi n’ụlọikwuu ahụ, uwe nsọ Erọn onye nchụàjà,+ nakwa uwe ụmụ ya ndị nwoke ga-eyi na-arụ ọrụ nchụàjà. 42 Ndị Izrel rụrụ ọrụ niile ahụ otú Jehova nyere Mosis n’iwu.+ 43 Mgbe Mosis leruru ihe niile ha rụrụ anya, ọ hụrụ na ha rụrụ ha otú Jehova nyere n’iwu. Mosis wee gọzie ha.
^ Ọ bụ nkume dị oké ọnụ. A maghị nkume nke ọ bụ abụ. O nwere ike ịbụ amba, hayasịnt, opal, ma ọ bụ tọmalin.